Doorshada Galmudug iyo dadaallada la xiriira dib-u-heshiin siyaasadeed (dhegayso) – Radio Daljir
Doorshada Galmudug iyo dadaallada la xiriira dib-u-heshiin siyaasadeed (dhegayso)
Luulyo 29, 2019 4:59 b 0
In muddo ah maamulka Galmudug waxaa ka taagnaa khilaafyo siyaasadeed oo ragaadiyey hor-u-socosho looga fadhiyey muddadii ay dhisnayd, taasoo sii xoogaysatay sannadkii ugu dambeeyey.
Khilaafkaasi wuxuu ahaa mid soo kala dhexgalay madaxda sare ee maamulka Galmudug iyo Hay’adaha dawliga ah ee maamulka oo Baarlamanaku uu ka mid yahay, keentay xildhibaanno kala fariista iyo mooshinno xilka qaadis madaxeed ah
Waxaan xarig jiid badan kadib Galmudug yimid R/wsaaraha dawladda federaalka bil iyo dheeraad ka hor, isagoo welinaku sugan Galmudug.
Imaanshahaasi waxaa uu soo dhaweeyey qyabo ka mid ah khilaafkii iyadoo is afgaradyo siyaasadeed ay dhaceen, loona ballamay doorasho Galmudug iyo shir dib-u-heshiisiin oo ka sii horreeya.
Haatan waxaa socda dadaallo la xiriira qabanqaabo dib-uheshiisiin, taasoo laftigeeda meelo saluugmo laga galiyey.
Cabdi Xaashi wuxuu ka mid yahay Baarlamanaka maamulka galmudug, wareysi uu siiyey Radio Daljir ayuu uga hadlay tallaabooyinka illaa hadda la qaaday ee doorasdho iyo dib u heshiisiin.
Dad ku dhintay toogasho ka dhacday Gobalka California